Kuvalwe umgwaqo izitshudeni zivuka umbhejezana eThekwini | isiZulu
Kuvalwe umgwaqo izitshudeni zivuka umbhejezana eThekwini
Zigqunywe esitokisini izitshudeni ezisolwa ngokubulala esinye
Bezilindwe ngengoma izitshudeni zase-UKZN ngaphandle kwenkantolo
Durban - Kuphoqeleke ukuba zivalwe izitolo ezisekhoneni likaMahatma Gandhi noDr Prixley ka-Isaaih Seme Street, abafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal beshaya kwasani obekudlula kulo mgwaqo namhlanje.
Laba bafundi abahlala eCoastlands Residence abebevele ngamawindi kule ndawo bejikijela izimoto ezidlulayo bathi becikwe wukuvinjwa kwamabhasi abayisa esikoleni ngabamatekisi.
Ngokusho komunye walaba bafundi osekomidini lezindlu ezenganyelwe yilesi sikhungo uMnu Zipho Sibiya,(20), uthi bathuthwa ngamabhasi enkampani u-Olympic naweKhwezi ukuya esikoleni.
OLUNYE UDABA:Izitshudeni zisabisa ngokuvala i-University of Pretoria
Uthi bathe besagibela ibhasi lehora lesikhombisa ekuseni kwaqhamuka amadoda azibize ngosomatekisi base-South Beach babuza umshayeli ukuthi unayo yini ipermit yokusebenza kule ndawo.
Uthi uthe umshayeli webhasi esachaza ukuthi akalayishi kule ndawo kodwa uthatha abafundi ngokwenkontileka yenkampani nenyuvesi bathi makabehlise abafundi ngoba kukhona okuzomethusa.
"Wonke amabhasi abefika bebewajikisa sagcina sivaleleke la singasayanga esikoleni. Abafundi ngokudinwa babuyele ezindlini zabo base bejikijela amabhodlela nezitini la emgwaqweni. Okubuhlungu ukuthi abanye bethi babhala izivivinyo njengoba bevaleleke lana nje," kusho lo mfundi.
Omunye walaba bafundi uMnu Mongezi Sikhakhane (19) , uthi ubeyobhala iphepha ngehora lesibili ntambama kodwa njengoba engasakwazanga kuzophoqeleka ukuthi abhale-isupplementary exam.
"Ibuhlungu ngempela le nto eyenzekile yize abanye bethu bekhombisa ukuyithakasela le nto. Kithina esaphuma emakithi sizimisela ngokuzofunda ngempela akusiwo umdlalo ukubuya uzobhala i-supp izikole zivaliwe sisemakhaya ngoba kugitshelwa ngemali," kuzikhalela uMnu Sikhakhane.
Kulokhu kujikejela ngamatshe obekwenziwa ngabafundi kulimaze imoto yomunye obezidlulela obengahlangene nale nto. UMnu Valentine Onyebuchi uthi ubeyothenga usawoti kwesinye sezitolo epake imoto yakhe eceleni komgwaqo. Uthi esebuya uthole imoto yakhe isiphahlaziwe ngokhonkolo lo okufakwa kuwo udoti oba seceleni kwemigwaqo engasoLwandle.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLietenant Colonel Thulani Zwane uthe amaphoyisa abiziwe ukuzoqapha isimo ngesikhathi kubhikishwa kodwa akekho olimele.
UMnu Derrick Rajikumar oyinhloko yezokuPhepha e-University of KwaZulu-Natal uthe abaphathi besikhungo baphezu kwezinhlelo zokuxazulula le mpicabadala.
Okhulumela usosesheshini wamatekisi ahambela eSouth Beach uMnu Assen uthe:
"Angazi ngempela ukuthi amabhasi avinjelwani ngoba awasebenzeli la kodwa asuke eqashiwe ukuzothatha abafundi. Ngaleyo ndlela awadingi ukuba nemvume yokusebenza ngoba afana namabhasi esuke eqashiwe ukuthwala umshado noma yiluphi olunye uhlobo lo mcimbi," kusho uMnu Rajikumar.
Okhulumela usoseshini wamatekisi aseSouth naseNorth Beach uMnu Assen Schapps ethintwa uthembise ukubuyela kuleli phephandaba nempendulo emuva kwalokho akaphindanga wabamba ucingo.
Izithombe ngu: DJUMA OLIVER